QAYBI OO XUKUN: Federaalka qabyaaladeysan ee Somalia (Qaybtii 5-aad) | Hadalsame Media
Home Maqaallada QAYBI OO XUKUN: Federaalka qabyaaladeysan ee Somalia (Qaybtii 5-aad)
(Hadalsame) 20 Jan 2021 – Nidaamka ‘federalka’ qabyaladeysan oo intaasoo dhan kulansaday ayaa haddana laga kari la’yahay madaxya-weynta Soomaalida in ay ka waantoobaan ama ay xataa darsaan waxa uu yahay hannaakaan aan dantu noogu jirin; waa hannaan si toos ah iyo si dadbanba uga hor-imanaya dastuurka ku meel gaarka ah sida ku cad, tusaale ahaan, qodobka 1aad, faqradiisa 3aad. Sidoo kale, bal fiiri qaabka ay u qoran yihiin waraaqaha rasmiga ah ee ka so baxa xafiisyada dowladda iyo waxa noogu qoran baasaborka Soomaaliga ah. Halkan ka akhri qaybtii hore…
Previous article”Dharbaaxooyinka aan Pirlo la dhacey aabbihiis xitaa abid kuma dhufan!” – Gattuso oo ka sheekeeyey wixii ay isla mareen Pirlo
Next articleYAAB: VAR oo xalay laga adeegsadey Aqalka Senetka Talyaaniga & sababta (Daawo)